Iimpawu zasimahla ze-12 zoyilo lwakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimpawu ezikhululekileyo ezili-12
Las ukwenziwa sisibonelelo ekufuneka sithathelwe ingqalelo xa uyile iwebhusayithi. Uninzi lwethu luzidibanisa noyilo "olungcolileyo", kodwa oku kungenxa yokuba sibonile amaphepha amaninzi awasebenzisileyo kakubi.
Es kubaluleke kakhulu ukwazi indlela yokukhetha ubunjani obulungileyo, obuhambelana nezinye izinto zewebhu kwaye zingaphazamisi ukufunda. Khumbula ukuba enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo kuyilo lwewebhu yile ukufundekaMasiphephe imvelaphi emnyama kunye neefonti eziluhlaza okwesibhakabhaka, okanye i-garnet, okanye ezinye iintlobo ze-chromatic aberrations. AYIYO indibaniselwano elungileyo.
Masenze kube lula ukufunda. Masisebenzise umahluko oqinileyo phakathi kwemibala yangemva kunye nemibala yokuchwetheza. Kuza kuhlala kulula ukufunda kwimvelaphi ekhanyayo kunemibala emnyama, njengoko eyokugqibela ikhathaza amehlo.
Ukuthathela ingqalelo oku, sinokukhetha uhlobo olulungele thina. Ngamanye amaxesha, kuphela siya kuthi sazi ubucukubhede obusetyenzisiweyo kuyilo lwethu: ukuba bayaqatshelwa ngumsebenzisi, luphawu olulungileyo. Kuba oku kuyakuthetha ukuba kugxilwe ekuqwalaselweni kwisicatshulwa, hayi izinto zokuhombisa.
Nazi iindlela ezili-12 zasimahla zokukhuphela kunye nokuzisebenzisa kuyilo lwakho. Khetha eyona ifanelekileyo!
Udonga oluMhlophe lweBrick
ICarbon Fibre enkulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Ukuhlelwa » Iimpawu ezikhululekileyo ezili-12
Amakhadi eKrisimesi ali-11
7 Iipakethe zesiphumo seBokeh ukubandakanya kuyilo lwakho kule Krisimesi